Typ.io dia mampiseho ny tolo-kevitry ny fonosana ho an'ny fitambarana | Famoronana an-tserasera
Ny fampifangaroana loharano 2 ao amin'ny bilaogy, tranokala na ecommerce dia ahafahana manome fahamendrehana sy mazava amin'ireo lahatsoratra rehetra tokony hovakian'ilay mpitsidika. Mahafantatra ny fomba hahitana ireo fitambarana endri-tsoratra tsara indrindra Tena ilaina izany rehefa mila manome teti-bola vaovao amin'ny mpanjifa isika.
Typ.io no fitaovana safidy ho loharanon'ny aingam-panahy hahita fitambarana 2 loharanom-pahalalana ho an'ity tranonkala manaraka ity, ny famolavolana fampiharana na fanasana sary izay azontsika omena amin'ny toeram-pivarotana sy ny dokam-barotra pirinty.
Typ.io dia tranokala iray izay miasa tsara ary ny fikirakirana azy dia tena tsotra, satria tsy maintsy ampidirintsika ny endri-tsoratra nofidina ho fototra ahafahany manome soso-kevitra fitambarana endritsoratra.
Ary na izany tranonkala izany aza avelanao ny fireharehanao amin'ny fampisehoana aminay habetsahana an'ireo tranonkala misy lisitr'ireo sosokevitra miorina amin'ny fitambarana. Primordial ho loharanom-aingam-panahy ary noho izany isika dia afaka manome izany fikitika manokana izany amin'ny bilaogy vaovao izay angatahan'ny mpanjifa amintsika hisarika ny rohy mankany amin'ny tranonkala.
Noho izany, ilay iray izay afaka ahitantsika ireo ohatra amin'ireo fitambarana ireo hatrany fampahafantarana ny tenantsika ho loharano ifotony hanolotra soso-kevitra vitsivitsy, io no ampahany manandanja indrindra amin'ny tranonkala iray izay azonao vangiana Ity rohy ity.
Miantehitra amin'ny zava-misy ihany koa fa alohan'ny hanoratanao loharano iray dia azonao atao tsindrio ny sasany amin'ireo efa tonga amin'ny alàlan'ny default ary izany matetika no be mpampiasa indrindra. Montserrat, Open sans ary maro hafa no ho eo. Aorian'ny fanerena iray dia ho hitanao amin'ny tena ohatra hoe ahoana no tavela am-baravarankely izay mampiseho azy ireo toy ny hoe pejin'izy ireo manokana.
Tranokala mahafinaritra hafa izany, na dia tsy fampiharana tranonkala aza ahoana ny Squoosh mametaka sary, manolotra tombony lehibe izy rehefa miresaka aingam-panahy avy amina endritsoratra vaovao sy ny fitambaran'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ahoana ny fomba hahitana ireo fitambarana endri-tsoratra tsara indrindra